A gaghị enwe oke ọkọchị dị ka atụ anya | Network Meteorology
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na ụkọ mmiri erughị ka atụ anya ya
Ọ bụ ezie na ọmụmụ bara ụba na okpomoku ụwa ga-eduga unwu nke siri ike karị, toro ogologo ma na-arịwanye elu, ugbu a, e nwekwara nchọpụta ọzọ na-ekwenyeghị n'echiche ahụ. Ọ bụ nke Mahadum California dị na Irvine na Mahadum Washington jikọtara ọnụ, nke edepụtara na akwụkwọ akụkọ sayensị Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Dị ka ndị dere si kwuo, nnukwu ikuku carbon dioxide na-enye ohere ka osisi nwee ike ijigide mmiri na ala, yabụ ha nwere ike ịkwado ọnọdụ okpomọkụ dị elu karị.
Ruo ugbu a, ọ bụ naanị ụkpụrụ ikuku (ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, ọdịda) ka a tụlere iji tụlee ọkọchị, dịka ọ dị na Palmer Drough Severity Index Site na ndeksi a, emeela atụmatụ na ihe karịrị 70% ga-enwe oke ọkọchị ma ọ bụrụ na n'ime otu narị afọ CO2 anwuru anwuruola site na anọ nke oge tupu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na etinyere ozi banyere iji mmiri eme ihe site na ahịhịa, uru a dabara 37%, n'ihi gịnị?
Carbon dioxide dị oké mkpa maka osisi. Na-enweghị ya, ha enweghị ike ịsị na ha agaghị eto. Iji banye ya, ha na-emeghe ihe owuwu ndị ha nwere n’akwụkwọ a na-akpọ stomata, ma nke a bụ nsogbu, ebe ọ na-eme ka mmiri pụọ. Ọ bụ ezie na ọnọdụ ahụ gbanwere ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ CO2 dị na mbara igwe kemgbe stomata achọghị imeghe ogologo oge ahụ, n'ihi ya kwa, mmiri efunahụ pere mpe.
N'agbanyeghị, ọ bụrụ na udu mmiri emee n'oge okpomọkụ, ha na-egbu egbu. Osisi na-esighi ike, na ime nke a, ụmụ ahụhụ na-egbu ha n'ime ụbọchị ole na ole. Yabụ, ọ bụrụgodi ụkọ mmiri ozuzo pere mpe, ha nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu.
I nwere ike ịgụ akwụkwọ zuru ezu ebe a (na Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na ụkọ mmiri erughị ka atụ anya ya
4 ịmata ihe banyere okpomoku uwa